Power Alertz nwere ike iweta mgbanwe ọma na ndụ ọtụtụ mmadụ
Home / Featured / Power Alertz nwere ike iweta mgbanwe ọma na ndụ ọtụtụ mmadụ na Naijiria
Power Alertz nwere ike iweta mgbanwe ọma na ndụ ọtụtụ mmadụ na Naijiria
ndiigbokwenu1 April 28, 2016	Featured, TEKNỌLỌJI Leave a comment 1,367 Views
Power Alertz bụ otu ụlo-orụ nwere ike iweta mgbanwe oma na ndụ otụtụ mmadụ na Naijiria. Power Alertz bu ulo-oru ohuru e meputara inyere umummadu aka n’Obodo ebe oku elektrik adighi adi oge nile.
Nwaafo igbo a, Chibuike Oraezue na otu onye Britain o so aruko oru Amanda Hawkins, kwuru si na ha di njikere iso ulo-oru oku elektrik obula ruo oru. Ulo-oru oku elektrik obula ga eso ha ruo oru g’enwe uru na nsopuru puru iche n’etiti ndi ha n’enye oku no. Maka na Power Alertz ga elekota ndi mmadu anya site na ikwasa ozi ga eme ka ndi mmadu mata mgbe a ga ewero oku na oge a ga eweta ya.
Chibuike Oraezue -CEO
Amanda Hawkins – Daireto
Uru ozi a bara ndi mmadu ka nku, n’ihi na o ga enyere ndi mmadu aka tuo atumaatu ihe ha ga eji oge ha mee n’ubochi obula. Power Alertz ga ezitere ndi n’eso ha ozi na nkeji asaato ma o bu iri-n’abuo tupu e were oku. Nkea putara na ndi n’eso Power Alertz ga amata oge a ga eweta oku na mgbe a ga ewere ya. Amuma a ga enyere ndi ga eweta ozi Power Alertz aka ime osooso mechapu ihe obula ha n’eme n’oge ka ha hapu iso taa udiri ahụhụ ndi n’ebughinuche na a g’ewere oku na ata.
Chibuike Oraezue, CEO Power Alertz kwuru si ” I norugo ebe i n’ede akwa, e were oku? Onwego mgbe i n’ekiri Futbol maachi, nkiri ma o bu ihe onyonyo n’amasi gi, e wee wepu oku? Onwego mgbe i n’aru oru e wee wepu oku tupu idozie edemede i n’ede ebe ogaghi efu-efu?. Oru gi nile mebisia . Mmadu ita-ahuhu maka na o maghi mgbe a ga ewere oku bu ihe ndi mmadu n’agabiga na Naijiria oge obula.
Mana chee echiche ihe i ga eme ma oburu na i nwetara ozi gwara gi oge a ga ewere oku. Gini ka i ga eme? I ga ede akwa gi osooso. I ga edozi akwukwo gi na edemede nile di na Komputa gi ofuma ka ha hapu imebi. I ga eme ngwangwa gaa gbanye oku jeneretor gi ka i nwee ike ikiricha ihe nile mere-eme n’ihe onyonyoahu n’amasi gi.
Amam na ndi ochichi na ndi ulo-oru n’ekesa oku na agba mbo ihu na ha melitere onodu oku elektrik na n’Obodo anyi a . Amakwam na ona ewuteri nne na oku adighi adi oge nile. O na emetutem n’obi na o otutu ndi mmadu enwero oku ma e nweghi ebe ha ga ele anya ma ha choro ichoputa ihe n’eme oku ha. Ya mere m ji malite njem a inye ndi mmadu ozi zuru oke gbasara oku elektrik ha n’enweta. Ebumnuche anyi bu na n’oge n’adighi anya anyi ga enwe akara n’adighi eri ego ndi mmadu nwere ike ikpo oge obula ha choro imata ihe n’eme oku elektrik ha.
Amanda Hawkins, Daireto Power Alertz kwuru si ” Abum onye ihe dabara oma. Ebim na London. Mana kemgbe m batara Naijiria, ahugom ihe ndi mmadu n’agabiga m’oburu na oku adiro. Ee etinyegom obim na onwem nile n’oru a. Na achorom iso nyee aka zoputa Naijiria n’aka nsogbu oku.
Site taa ruo April 29, Amanda na Chibuike ga ano na Lagos n’akwalite oru a. Oburu na i choro iso ha kpaa nkata, I nwere ike irute ha na
Previous E kpughego atumaatu ndị APC abụọ kpara na nzuzo imegbu ndị igbo
Next Phyno ft Olamide – Fada Fada